Gabadhii u horeysay ee loo xiro darajada Sarreeye Guuto. – Madal Furan
Hoy > Warka > Gabadhii u horeysay ee loo xiro darajada Sarreeye Guuto.
Gabadhii u horeysay ee loo xiro darajada Sarreeye Guuto.
Muqdisho (Madal Furan) Sakiya Xuseen Axmed oo dhowaan loo magacaabay Taliye ku-xigeenka Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka wakiil ah Madaxweynaha jamhuuriyadda, Maxamed C/llaahi Farmaajo u xiray darajada Sareeye Guuto.
Sakiya ayaa noqoneysa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee gaarta darajada Sareeye Guuto.
Madaxwayne Farmaajo ayaa 16kii bishan Agosto waxaa uu darajada Sarreeeye Guuto u dallacsiiyay Zakiya Xuseen Axmed una magacaabay taliye ku-xigeenka Booliiska Soomaaliyeed, iyada oo noqotay gabadhii ee ugu horreysay ee derejadaas ka gaarta ciidamada ammaanka dalka.
Kulankii Madaxweynayaasha iyo Halka Madaxweynaha oo Rajo Fiican Yeeshay.
Shariif Xasan oo ka qayliyey diyaarado Baydhabo ku daabulay gaadiid aan xabbadu karin
SAWIRO:- Dowladda Qatar oo Gaadiid ku Wareejisay Dowladda Soomaaliya